Afrika, 11 January 2019
Dab ka kacay suuqa Bakaaraha
Dhadhaab: QM oo cayrisay shaqaale badan
Natiijada doorashada Congo oo la shaaciyey
Musharaxa kaalinta labaad ka galay doorashadii madaxtinimo ee dalka jamhuuriyadda Dimoqraadiga ah ee Congo, ayaa ku gacan seeray natiijada rasmiga ah oo muujisay in Feilx Tshisekedi uu ku guuleystay doorashadii dhacday 30-kii December, kuna qeexay mid been abuur ah.
Al-Bashiir oo ku gacan seeray inuu is-casilo
Madaxweynaha Sudan ayaa ku gacan seeray baaqyo soo kordhaya oo looga dalbanayo inuu is-casilo, waxaana uu sheegay inuu diyaar u yahay oo kaliya inuu xukunka ku wareejiyo hab doorasho.
Gabon oo sheegtay inay fashilisay isku day afgambi
Milatariga dalka Gabon ayaa maanta qaaday isku day afgambi oo ka dhan ah dowladda dalkaas, kaasi oo goor dambe ay dowladda sheegtay in la fashiliyey.
Qaramada Midoobay oo Hakisay Shaqaalaha Imanaya Muqdisho
Qaramadda Midoobay ayaa soo saartay qiimayn hordhac ah oo ku saabsan weerarkii maalintii sannadkan cusub ee 1-da Jannaayo 2019-ka lagu qaaday xarunta Qaramada Midoobay ee Garoonka Diyaaradaha Muqdishu
Mareykanka oo Digniin u Diray Guddiga Doorashada Congo
Dowladda Mareykanka ayaa ka dalbatay Jamhuuriyadda Dimoqraadiga ee Congo in ay shaaciso natiijada saxda ah ee doowashadi madaxtinmo ee dalkaasi ka dhacday dhamaadki bishi hore.
Falanqayn: Doorashada Puntland
Biyo la'aan ka jirta qeybo ka mid ah Djibouti
Tan iyo maalintii shaley qeybo badan oo ka mida xaafaddaha magaalada Djibouti ee xarunta dalka Djibouti waxaa ka taagan biyo la’aan saameysay nolosha dadka.
Suxufiyiinta oo ku biiray shaqo joojinta Sudan
Koox saxafiyiin ah ayaa ku biiray kooxaha ururada bulshada iyo shaqaalaha rayidka ee dalka Sudan ka wada shaqa joojinta ay ku taageerayaan mudaaharaadka looga soo horjeedo dowladda madaxweyne Cumar al-Bashiir.
Xasarado weli ka taagan dalka Sudan
Ururada shaqaalaha ee dalka Sudan iyo kuwa dadka xirfadlaaasha ah ay leeyihiin ayaa ku baaqay shaqo joojin guuod iyagoo ka ashtakoonaya qiimo koror ku dhacay rootiga iyo shidaalka dalkaas.